ရွာထဲ…၀င်ကြသူများထဲမှ…တချို့အတွက်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Computers & Technology » ရွာထဲ…၀င်ကြသူများထဲမှ…တချို့အတွက်…	44
Posted by Thint Aye Yeik on Jul 29, 2014 in Computers & Technology, Creative Writing, Environment, History, My Dear Diary | 44 comments
ပိုစ့်တင်ရင်.. စာလုံးကို..အရောင်ခြယ်တာတို့ …စာသားအကြီးအသေးလုပ်တာတို့ .. မလုပ်တတ်သေးဘူးဆိုလို့ …
တခြားသူတွေလည်း (သိပြီးတတ်ပြီးသူတွေကအကြောင်းမဟုတ်.).မသိသေးသူတွေများ ရှိဦးမလား..တွေးမိလို့ …
အရင်က… အံဇရာအတုံးတို့ … လမ်းညွှန် တင်ပြထားတာ ရှိပေမယ့်….
အခု ဖုန်းနဲ့ ..၀င်လုပ်တဲ့..လက်ရှိ ပုံစံ နဲ့ .. ပြန်တင်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါကြောင်းးး
www.mandalaygazett.com ထဲ.. ၀င်လိုက်ရင်.. ပထမဆုံးမြင်ရမှာက..ဒီလိုကြီးဖြစ်နေမယ်..ဆိုရင်…
Desktop ဆိုတာလေးကို ရွေးပါ
Desktop ဆိုတာလေးကို..ကလစ်ပြီး..ခဏစောင့်လိုက်တာနဲ့.. ကွန်ပူတာမှာ မြင်ရသလို…
ကွန်ပူတာမြင်ကွင်းလို..မြင်ရပြီဆိုရင်တော့.. Add new ကို ရွေးရတာ လွယ်သွားပါပြီ..။ မတွေ့ ရင်..
ညာဘက် အပေါ်ထောင့်နားက..Site Admin ကို ကလစ်လိုက်ရင်.. Dashboard ပေါ်ရောက်သွားပြီး…
Add New ကို..အလွယ်တကူမြင်တွေ့နိုင်ပါကြောင်း…
Add New ကို ရွေးဖို့ လွယ်သွားပြီ။
တကယ်လို့ ..Add New Post ကိုကလစ်လို့ .. ..
အောက်က ပုံစံကြီးပေါ်နေရင်.. Visual ကို..ကလစ်လိုက်ပါ…
visual ကို ကလစ်လိုက်လို့ ။။။ ဒီလို…ဒီလို ပုံစံဖြစ်သွားရင်..အိုကေပြီ.. ။
ပိုစ့် ခေါင်းစဉ်လေးတော့..ပေးမယ်ဟုတ်… Title လေး..ရေးပေတော့..
အောက်က..စာရိုက်လို့ ရတဲ့ အကွက်ထဲမှာ…ကြိုက်ရာ စာသား ချရေးပေတော့ဗျို့ .. .။
တခြားနေရာမှာ..ရေးထားပြီးသားရှိရင်… အဲဒီ စာသားတွေကို..Copy ယူ… ။
ဒီအကွက်ထဲ.. လာချပြီး.paste လေး..လုပ်လိုက်ရုံပဲ…။
အောက်က…အကွက်ထဲ..စားလေးရေးထည့်.. /ရေးပြီးသားရှိရင်..copy ယူပြီး paste ပေါ့
စာရေးတဲ့အကွက်ရဲ့…အပေါ်နားမှာ… A ပုံစံလေး..ရှိတယ်.. ။
အဲဒီအပေါ် ထောက်ပြီး..ကလစ်လိုက်.. ။
စိတ်ကြိုက်အရောင်ကိုရွေးလို့ ရပါတယ်.. ။
ကိုယ် အရောင်ခြယ်ချင်တဲ့..စာသားကို.. Select တော့..အရင်လုပ်… ။ Select လုပ်ပြီးမှ… ကိုယ်ကြိုက်ရာ ကာလာကို…ကလစ်လိုက်…
ကိုယ် အရောင်ခြယ်ချင်တဲ့စာသားကို Select လိုက်/ ပြီးရင် A ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး.အရောင်ရွေးနှိပ်လိုက်ရုံ
ဒါကတော့။။။။ စာသားကို… အကြီးအသေး…လုပ်ဖို့ … ။
ကိုယ် Size ပြင်ချင်တဲ့..စာသားနေရာကို..Select လုပ်လိုက်… ပြီးရင်… A ရဲ့ ဘေးမှာ ရှိတဲ့ … Paragraph ဆိုတာကို ကလစ်ပြီး… ကြိုက်တဲ့ အကြီးအသေး Size ရွေးပေတော့… Heading 1 ဆိုတာကြီးက.. စာလုံးအကြီးးးးကြီး…..ဖြစ်သွားစေတယ်.. ။
စာလုံးအကြီင်္းအသေး လုပ်ချင်တဲ့စာသားကို Select ပြီး / paragraph ကိုနှိပ်/စိတ်ကြိုက်ဆိုဒ်ရွေး
ဒါလေးက… .. ပိုစ့်ကို..ကြိုတင်ချင်ပေမယ့်.. ကြို မတင်တတ်သေးတဲ့သူတွေအတွက်… Scheduled လုပ်နည်းလေးပါ…။ ရှင်းရှင်းလေးပါ… ပိုစ့်တင်ရင်..Publish လုပ်ရတယ်..ဟုတ်.. ။
အဲဒီ publish လုပ်တဲ့နေရာမှာပဲ… publish-immediately ဆိုတာလေး.. ရှိတယ်.. ။ ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း… Edit လုပ်လို့ ရပါတယ်.. ။
မန်ဘာဝင်တိုင်းလုပ်လို့ ရတယ်နော်.. ။ တကယ်လို့ … ပိုစ့်ကို… Scheduled လုပ်ပြီး..ကြို..တင်ထားချင်တယ်ဆိုရင်… publish-immediately ဘေးက… Edit ကို.. ကလစ်လိုက်ပါ ။
ဒါကတော့..ရှယ်ဂျုးပိုစ့်လုပ်ဖို့ ../ publish လုပ်မယ့်နေရာမှာရှိတဲ့..publish-immediately-ကို Edit ကလစ်
Edit ကို.. ကလစ်လိုက်တာနဲ့..အောက်က ပုံအတိုင်း ပေါ်လာလိမ့်မယ်.. ။
ဒိတ်ကို.. စိတ်ကြိုက်သာပြင်ဗျို့ … ။
ပြီးရင်.. OK ဆိုတာလေးကို…ကလစ်ဖို့မမေ့နဲ့ …နော်..
date ပြင်ပြီးလို့ ..ok ကို ကလစ်ပြီးတာနဲ့ …
အောက်က.. publish လုပ်တဲ့… လိမ်မော်ရောင်နဲ့စာသား.. publish ဆိုတာကနေ… Scheduled ဆိုပြီး..ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်. .. ။
ကိုယ်တင်ချင်တဲ့ Date ကို..ပြောင်းထည့်/ပြီးရင်..0k ကို ကလစ်
ပိုစ့်ကို… ချက်ချင်းတင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်… ကြို..တင် ထားတယ်ပဲ..ဖြစ်ဖြစ်.. Category တော့… ခွဲထည့်ခဲ့ဖို့ မမေ့ရဘူး…နော်.. ။
ကိုယ့် စာနဲ့ သင့်တော်တာတစ်ခုခု ရွေးထည့်ဖို့ …
အောက်နား ကို..ဆင်းပြီး.. Categories ဆိုတဲ့ ဇယားကွက်ထဲက..ရွေးပေတော့…ဗျို့ .. ။
အောက်နားကိုဆင်းကြည့်/ ကိုယ့်စာနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် category လေး တစ်ခုတော့ရွေး
ချက်ချင်းတင်မယ်ဆိုရင်… Publish ကို.. ကလစ်ပြီး.တင်နိုင်ပါပြီ.. ။
(( Scheduled လုပ်ပြီး..ကြိုတင်ထားမှာဆိုလည်း… Scheduled ဆိုတဲ့ လိမ်မော်ရောင် စာသားလေးကို… ကလစ်လိုက်ရုံပါပဲ.. ။
ထည့်ထားတဲ့…အချိန်..နေ့ရက် ရောက်တာနဲ့ ..အော်တို..တက်သွားပါလိမ့်မယ် ။ ))
အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးရင်..schedule ဆိုတာလေးကိုကလစ်ရုံပဲ../ schedule မလုပ်ပဲ..ချက်ချင်းတင်မယ်ဆိုလည်း…Publish ကိုကလစ်ပေါ့
မတတ်သေးတဲ့..ချာတိတ်က… ချာဂျီး..လုပ်လို့ ပြီးပါပြီ… ။
မရှင်းတာ.. ရှိရင်… comment ထဲက..မေးကြနိုင်ပါသည် ။ သိသူများ…၀င်ဖြေပေးကြစေလိုပါသည် ။
အလင်းဆက် ( Gazette )
Thint Aye Yeik has written 603 post in this Website..
lu lu says: သိသလိုမသိသလိုနဲ့ အခုပိုသိသွားပြီး
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12139
alinsett (gazette) says: အချိန်ပေးပြီး… လာဖတ်ပေးတာကိုလည်း..ကျေးဇူးပါဗျာ.. ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4015
manawphyulay says: ဖုန်းနဲ့တော့ ပိုစ့်မတင်ဖူးသေးဘူး။ နောက်ပြီး ဖုန်းနဲ့ ရေးရ တင်ရတာ အားမရသလိုပဲ။
စာဖတ်တာတောင် ကွန်ပျူတာနဲ့မှ ဖတ်ရတာ အမြင်ကျယ်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
ဖုန်းကလည်း စကရင်အသေးပဲ သုံးနေလို့လားတော့မသိဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းနဲ့သုံးရင် လုပ်ရတာ လွယ်သွားအောင် မှတ်ထားလိုက်ပါတယ် ကျေးဇူးပါ။
alinsett (gazette) says: မမ မနောရေ… အရောက်လာ ဖတ်ရှု လေ့လာပေးသွားတဲ့ အတွက်ရော..
ကွန်မန့်လေး…ထားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပါ..ဇူးဇူး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 19
Kyaw Lay says: အခုလိုရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုဆက်
အလင်းဆက် says: ဟုတ်စ်ကဲ့စ်
Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: ကျေးကျေးပါ.. မသိသေးတာ သိသွားလို့..
3G တော့ရမှ သုံးပါ.. မဟုတ်ရင် နောက်လာတဲ့ ကော်နက်ရှင်က အဲလောက်မှ ရတော့မှာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12139
alinsett (gazette) says: အခု လက်ရှိ3G ကြီးကလည်း…
ပေါ်ကိုမလာပဲ..ပျောက် ပျောက်နေတာများတယ်.. ။
ပိုက်ဆံကတော့…မဖြတ်မဖြစ်..ဖြတ်တယ်.. ။ လိုင်းကတော့…မပေါ်လည်း..ဖြစ်တယ်.. အလွန်တရာနှေးပြီး..သုံးတဲ့သူ…ဘာမှ သုံးမရဖြစ်လည်း…သူတို့ အကြောင်းမဟုတ်ဘူး.. ။
ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်တစ်ခါဖွင့်တိုင်း တစ်ခါ..ဒေါသထွက်ရတယ်.. ။
ခက်ပုံ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 943
မင်း ခန့် ကျော် says: နာ့ပယောဂနဲ့ဝင်လာတဲ့အကောင်ဒွေ
ဒီပိုစ့်ကို မြင်ပြီး နာလည်ပါစေ
ဒီလို ဆရာလင်း လိုမရှင်းတတ်ဘူးရယ် သိုင်းခယူပါဆရာလင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ခင်ဇော် says: ဘာရယ်။
ရန်ဖြစ်ဖို့ လူတွေ ခေါ်လာတာလားးး အူးလေးးး
သများကိုလည်း ခွန်းဆင့်နေခြည်နဲ့ တူကြောင်း ပြောပြလိုက်ပါ။
(မိုင်တိုင် ၅၂ ရုပ်ရှင် ထဲက) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 943
မင်း ခန့် ကျော် says: ချက်ပေါက်ကမေးလို့လွတ်လိုက်တာပါအေ
alinsett (gazette) says: ဘေးမှာရေးထားက… မရှင်း မရှင်းတွေမို့ နေမယ်.. ။ အဟိ ။
Was this answer helpful?LikeDislike 12139
alinsett (gazette) says: မမဂျီး… မိုင်တိုင် ၂၆ ဟုတ်ဖူးလား ။
အဲ့ဒီထဲမှာ..ခွန်းဆင့်နေခြည်လေး..လှသားပဲ.. အဟိ ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ခင်ဇော် says: ငင်?? ဟုတ်လားးး
အဲလို ပဲ ဂဏန်းအရမ်းပိုင်တာ။
အဖြူဝမ်းဆက်လေးနဲ့ နှုတ်ခမ်းနီတို့ လိုင်နာတို့က အစ လှတာ။
Was this answer helpful?LikeDislike 188
Nyo Win says: ကျေးကျေးအကြီးကြီးပါ..အလက်ဆင်းရေ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12139
alinsett (gazette) says: ဟုတ်ကဲ့
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: စေတနာအပြည့်တဲ့ ခုပိုစ့်တင်ထားတာ သိသာပါတယ် အလက်ဆင်းရေ..။
alinsett (gazette) says: ကျေးဇူးပါ. မမကောင်ကင်ပြာ.. .
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
kyeemite says: သစ်စ အစ်စ အေ ဂွတ်ဒ ဖေါ်နရူး ကမ်းမား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12139
alinsett (gazette) says: သိုင်းကျူး.. ဦးကြီး မိုက်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1991
Choo says: နီချာချေသလို နာလိုက်ပီးချာချေလိုက်တာ နာ့တယ်လီဖုံးယီး ဟန်းတွားဘီ :'(
alinsett (gazette) says: ဟောာာာာဗျာာာာာာာ
ဒါရှို မမchoo ရဲ့ ဖုန်းက
မော်ဒယ် အနိမ့် အမြင့် ဟန်းစက်နဲ့ များ ဆိုင်သလား။
ကျနော့် ဖုန်းဆို နိမ့်လိုက်သမှ
HUAWEI Y320 ခုနှစ်သောင်းကျော်တန်လေး။
ကွန်ပူတာလေးတစ်လုံးလို သုံးလို့ရနေလို့ တော်သေးတယ်
ဟန်းတာကတော့ ဟန်းတတ်တဲ့ဖုန်းက မော်ဒယ် ဘယ်လောက်မြင့်မြင့် ဟန်းတယ်နော်
ကျနော့်အသိတွေဆို ဆမ်ဆောင်း ဂရန်းတွေ နုတ်3တွေ
အဲဒီ ဖုန်းကြီး ဘာမှ လုပ်မရတော့အောင် ဟန်းသွားတတ်တာဟာ
တတ်ကျွမ်းသူများ ဒီပိုစ့်အောက် လာရှင်းပြရင်
ဒါမှ မဟုတ်လည်း ပိုစ့်လေးတစ်ပုဒ် သီးသန့်တင်ပေါ့။
(ပိုစ့်တင်ရင် ၂၀၀+comment ??
comment နဲ့ ဝင်ပြောရင် 13 ကျပ် / စဉ်းစားနော် အဟိ။ သဂျီး မမြင်စေရ )
Choo says: ဟုတ်ဒယ် အဲဗားဟန်းတဲ့ဆမ်ဆောင်းအမျိုးပါပဲအေ မော်ဒယ်တော့မမျင့်ရှာဘာဘူး ဂလက်စီအေ့စ် လေးရယ်ဘာ
ဒဂယ့် ဟန်း စက် :'(
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4812
TNA says: ကျေးဇူးပါ။ မေးမယ်မေးမယ်နဲ့ မမေးဖြစ်ဘူးအလင်းဆက်ရေ။ ခုတော့ ပြောပြပေးလို့ကျေးဇူးပါတော်။ မဟုတ်ရင်သများမှာ ဒဂျီးအလကားပေးဒဲ့အရုပ်ကလေးတွေနဲ့လုပ်စားနေရဒါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4812
TNA says: ဆက်ဆက်ရယ် မေးထဲကို အဲ့ဒါလေး Word file လေးနဲ့ပို့ပေးနိုင်မလားဟင်။ ကူးဖို့ခက်နေလို့
alinsett (gazette) says: ကြိုးစားကြည့်မယ် တဲသီ။
alinsett (gazette) says: ဒါနဲ့…တဲသီရော…
TNA says: ဖွေးဖွေးလား အောင်မဲလင်းဆီတွားတောင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12139
alinsett (gazette) says: မေးလ်ထဲ…ပို့ လိုက်ပြီ တဲသီ.. ။
ကျနော့်ဆီလည်း…ဖွေးဖွေးကို.မေးလ်ထဲ..ထည့်ပို့ပေးမလား.. Was this answer helpful?LikeDislike 8068
အရီးခင် says: ပေးဝေသူနဲ့ ဆက်ခံ သူများ အကျိုးများ အလုပ်ဖြစ်စေတဲ့ Post လေးပါ။။
အရီး အကြိုက် ကတော့ စာလုံးပြူးပြူး ကြီး တွေထက် ပုံမှန် Font ဆိုက် လေး က ပိုပြီး ဖတ်လို့ ကောင်း သလားလို့။
သို့ပေမဲ့ Size ကြီးကြိုက် လဲ သုံးပါလေ။
သူ့အကြိုက် ကိုယ့်အကြိုက် ကွဲ နိုင်သပေါ့။
alinsett (gazette) says: ကျနော်တော့ စာလုံးအကြီးလေးတစ်ကြောင်းနဲ့ စရတာကို သဘောကျပြီး
အနီနဲ့ အပြာရောင်လေးတွေကို ချစ်နေတယ် အရီးရေ
padonmar says: ကျေးကျေးပါ ဆက်ဆက်ရေ၊အဲသဟာတွေ မသိခဲ့ဘူး။
Bold တို့ မျက်ဖွင့်ပိတ်တွေ Smiley တွေ ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ ရေးပြပါအုံး။
alinsett (gazette) says: အန်တီရေ…
comment ထဲမှာတော့.. စာသားကို အရောင်ခြည်လို့ မရဘူး(ထင်တယ်)
Bold တို့ .. b-quote လုပ်တာတို့ တော့.. ရတယ်.. ။
နောက်တစ်ခါ…ပုံလေးတွေနဲ့ … ထပ်ရှင်းကြည့်မယ်နော်.. ။
ရွာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့… နည်းလမ်းလေးတွေ…
ကျနော် အသုံးပြုနေတဲ့ထောင့်ကနေ… ထပ် ပြောပြချင်တာလေးတွေ ရှိသေးတယ်.. ။
လမယ်..လာမယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12139
အလင်းဆက် says: အံမယ်… ဒီပိုစ့်လေးက… ညာဘက်နားက..
ဖတ်ပါ၊..မှတ်ပါ၊..ပြီးမှတင်ပါ..။…စာရင်းထဲ… ၀င်နေပါလား.. ။
ချိတ်ပေးထားတဲ့ …အတွက်.. ဇူးဇူးပါ..သဂျီး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ဇီဇီ ခင်ဇော် says: ဆက်ဆက်
ပြောမို့ဟာ။ ခု ဒီပို့(စ) မြင်တုန်းပြောမယ်။
ပို့(စ) တင်သူတွေက တင်ပြီး Draft ထဲထားခဲ့။ နောက်နေ့ Post ဆက်တင်တော့ နောက် New Post Boxအသစ်ဖွင့်ပြီး တင်ဖြစ်ရော။
အဲဒီတော့ Draft ထဲမှာ မရေးရသေးတဲ့ Post Box အသစ်တွေနဲ့ Draft အများကြီးဖြစ်နေရော။
သူတို့ နောက် ပို့(စ) တွေတင်ချင်ရင် အဲဒီ Draft ထဲက အရင်မရေးဖြစ်တဲ့ ပို့(စ) Box တွေ ပြန်သုံးနိုင်ကြောင်းလေး ရေးပေးကြည့်ပါလားးး
All Post ကနေ သွားပြီး ကြည့်ရတဲ့ နည်းလေ.။
အလင်းဆက် says: ဟုတ်
အချိန်ရတာနဲ့ အာ့လေး ရေးဦးမယ်
manawphyulay says: အင်း ဖုန်းနဲ့က မဖွင့်ဖြစ်ဘူး အလင်းဆက်ရဲ့…
အလင်းဆက် says: ဖွင့်ဖြစ်သူတွေအတွက်ပေါ့ခညာ
Kaung Kin Pyar says: .ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဟယ်….
.နာလဲ လျှာတော့ လျှာကျိသေးတယ်…..။ လင့်ခ့်ပို့ပေးမှပဲ မြင်တော့တယ်…။
အလင်းဆက် says: ငှဲ ငှဲ…
ပိုစ့်ထဲ လင့် အရှင်လတ်လတ်ထည့်ချင်သူများ…မထည့်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်…
လင့်ခ်အရှည် ထည့်နည်းလေး…ရေးပေးရင်ကောင်းမလားတွေးနေသေး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 176
La Yeik says: ကျေးဇူး အူးသူရရေ…ဖုန်းနဲ့ မတင်တက်လို့ ဂွကျနေတာ…အခုမှ နည်းသိတော့တယ်…
အလင်းဆက် says: အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် ဝမ်းသာမိပါကြောင်းးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ၀ိုင်ဖိုင်၁တုံးပဲမိတဲ့ကြားက မသိတဲ့လူတွေသိရအောင် ကြိုးစားရှင်းပြပေးတဲ့ အလက်ဆင်းရဲ့စေတနာကို ချီးကျူးပါတယ်ကွယ်။
အလင်းဆက် says: ဇူးဇူးပါ မမနန်းတော်ရာသူ.. အဲ့ပိုစ့်တင်ဖို့… ဝိုင်ဖိုင် ကျကျ သွားလို့… တစ်မိနစ်လေးကျပ်နဲ့ အဝိုင်းလေးလည်တာကို ဖွင့်ကြည့်ရသေး..
ပိုစ့်က အသုံးချမယ့်သူတွေ..အသုံးဝင်တယ်ကြားရင်…တင်ရကျိုး နပ်ပါတယ်လို့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.
Comments By Postအဝင်ကော - ko six - Thint Aye YeikMarijuana - ဆေးခြောက် - Thint Aye Yeik - kaiအရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇ - kai - kaiကဗျာဆန်ဆန်လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့...ကဗျာဝကမ်းခြေ (or) အပျိုစင်ကမ်းခြေ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeik''ဤ''ကို ခပ်လွယ်လွယ်--ကျွဲချင်သူတွေ များလွန်းတော့လည်း... - Thint Aye Yeik - Thint Aye Yeik၀မ်း ဗိုက် ပြားချက်နေဖို့ မနက်ခင်း တိုင်းစားပေးသင့်တဲ့ အရာ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikထူးမြတ်သောသွေးလှူခြင်း - aye.kk - etoneမြသပိတ်ရေပြာအိုင် - သျှားသက်မာန် - Ma Eiကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကိုနေ့ ချင်းပြန်စရိတ်ငြိမ်းနဲ့ သွားကြမယ် - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikဖွင့်မရတဲ့ ဦးနှောက် - ဂျစ်စူ - Thint Aye Yeikချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား - ဂျစ်စူ - aye.kk" အငုံ့စိတ် " - ဂျစ်စူ - Thint Aye Yeikအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း - ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇ - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် - ဂျစ်စူကဗျာလေး မူးနေပြီ - aye.kk - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက်နာဂတောင်တန်းတွေဆီက ပျံ့လွင့်လာတဲ့တေးသွားများနဲ့နှစ်ကူးပွဲတော် - သျှားသက်မာန် - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက်ယာဉ်အို စက်ဟောင်း ထိန်းမောင်းနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် - Thint Aye Yeikဘီယာသောက်တဲ့ ပုဇွန် - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် - ဇီဇီစာပေတိုက်ပွဲခေါ်သံ(၂)-NEO-CLASSICISM တွေ ထွက်ခဲ့ဟေ့ - Thint Aye Yeik - ဂျစ်စူချစ်ခြင်းပုံပြင် နိဒါန်း - sorrow - CrystallineThe Sense of Traveling - sorrow - sorrowဖွဲတစ်ဆုပ်... - sorrow - ဦးကျောက်ခဲခရီးသွားခြင်းကသင်ပေးသည့်အရာများ ******************************************* - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeik"ပြည့် " - aye.kkစာပေတိုက်ပွဲခေါ်သံ(၁)- မျှစ်ကြော်ရဲ့လက်သီးချက်ကို မြည်းစမ်းခြင်း - Thint Aye Yeik - ဇီဇီ​မွေး​နေ့ဆိုတာ - Thint Aye Yeikအလင်းဆက် ကျိုက်ထီးရိုးသွားတုန်းက.... - Thint Aye Yeik - အလင်းဆက်ကျိုက်ထီးရိုး ကေဘယ်ကား - သျှားသက်မာန် - Darli May Ayeအပျော် - ko six - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက်" ၁၆ အလွန် ၁၇ " - Darli May Ayeစည်းကမ်းတဲ့လား...လိုက်နာချင်စိတ်က အဓိက... - kai - Thint Aye Yeiki carry your heart with me (i carry it in - ၀င့်ပြုံးမြင့် - uncle gyiကမ္ဘာမြေဆွဲအား ကို ဆန့်ကျင် ထွန်းပနေတဲ့ ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုး .. - ၀င့်ပြုံးမြင့် - Thint Aye Yeikအင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါတတ်ကျွမ်းလိုသော် - (၉) ပါမောက္ခမျိုးကျော်မြင့် - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeik🌲🌲🌲တိမ်ပင်လယ်ပေါ်က အေးမြတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေးသံတောင်ဆီ🌸 - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikအရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ - kai - kaiအံဖွယ်တန်ခိုး ကျိုက်ထီးရိုး - Thint Aye Yeik - သျှားသက်မာန်စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ လည်ပတ်စရာနေရာများထဲမှာ Garden By the Bay(ပုံပါ) - သျှားသက်မာန် - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက်Category	Arts & Humanities
ကျပ်တသိန်းသို့ Top 10Anzartone (95532 Kyats )alinsett (95145 Kyats )kyeemite (91703 Kyats )weiwei (83114 Kyats )SP (80986 Kyats )padonmar (76894 Kyats )blackchaw (76343 Kyats )Foreign Resident (59014 Kyats )monmon (58579 Kyats )Northern Onestar (56676 Kyats )FB	FB